Odayaasha Galmudug oo ka kulmay Qilaafaadka ka jira Maamulkaasi – SBC
Odayaasha Galmudug oo ka kulmay Qilaafaadka ka jira Maamulkaasi
Odayaasha dhaqanka iyo guurtida Maamul goboleedka Galmudug ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Gaalkacyo xarunta gobolkaasi Mudug waxa ay ku lafa gureen qilaafaad mudooyinkii ugu dambeeyay kajira Galmudug.
Odayaasha ayaa cambaareeyay qilaafaadka taagan, iyagoona sheegay in ay tahay arin aan loo baahneyn oo hoos u dhigeysa sharafta shacabka Galmudug,
“Galmudug waxa ay u baahantahay Badbaado, waxaa ku dhexjiya Qilaafaad Badan oo aan dan u aheyn Umada Galmudug, aan meel ka wada qabano oo kaga hortagno tafaraaruqa oo aan guda galno badbaada galmudug” ayaa ka mid aha Hadalada Gudoomiyaha Odayaasha Galmdug oo isagu ka hadlay kulanka.
Waxaa sidoo kale lagu cambaareeyay kulanka rag iyagu Odayaal iyo Masuuliyiin ah oo saxaafada dibada iyo kuwa gudahaba ka hadlay dhaliyayna muran iyo khilaaf weyn oo ilaa heer madax iminka gaaray.
Waxay ku dhawaaqeen odayaashu in ay xaaladu noqoto mid la dejiyo ilaa iyo inta xal laga gaarayo khilaafaadyadan ka jira Galmudug.
Sikastaba ha ahaatee Mudooyinkii ugu dambeeyay Maamulka Galmudug waxaa soo food saartay khilaafaadyo ku aadan xilka madaxweyne nimada Maamulkaasi iyadoo iminka ay kudaha galmudug ay ku sugan yihiin rag sheegtay Madaxweyne nimada maamulkaasi iyo Madaxdii galmudug sida maxamed Axmed Caalin.